I-Carless Touch Car Wash Shampoo Formule | Iindleko ezinkulu-eziphumelelayo
Ikhaya / iimveliso / I-Car Wash Wash Shampoo Formula
Shampoo yokuhlamba imoto
Ifom yokuhlamba imoto ngeSepha
Ngokuqinisekileyo i-shampoo yokuhlamba iimoto yinto engafunekiyo yokucoca nawuphina umnini moto, izikhululo zenkonzo yezithuthi.
Kodwa kufuneka ufumane ingozi ukuba izitshizi zamanzi kunye nezinye izicoco zendalo zingabangela izithuthi zabo. Sinokusebenzisa iikhemikhali ezinobungozi eziyingozi kwizithuthi, kwimpilo yethu nakwimeko yendalo. Kwimeko apho, indlela yokukhetha imoto yokuhlamba imoto okanye ukuhlamba imoto kubalulekile izinto.
Yintoni esinokuyenza? Nika njalo unika i-eco car shampoo ye-shampoo izithako kunye nomthengi wethu.
Powder Umgubo wokuhlanjwa kweemoto ongachukunyiswanga.
♣ Izithako ezinobungakanani be-Eco, ifomula ye-shampoo yokuhlamba imoto.
♣ Yisula imveliso yokucoca imoto.
♣ Gcina iindleko zothutho kunye neendleko zokuhlamba imoto.
Ukunciphisa iindleko zemoto yakho yokuhlamba imoto?
I-OPS High Foam Car Wash Shampoo iphuhliswa ukuhlambulula isondo elilodwa kuphela. Iquka izinto eziphambili
umfomula owukhupha ngokukhawuleza utywala obunzima, indlela engcolileyo kunye ne-contaminants ngaphandle kokukhusela ukukhuselwa kwe-wax.
Inika amandla okucocwa ngokugqithiseleyo ngelixa uhlambulula umhlaba ukuze uncede ucoce kwaye unqabile kwi-peyinti
esikhundleni sokugalela kwipende. Ukutshatyalaliswa ngokukhawuleza kumanzi ashushu okanye abandayo. Imveliso yokuhlamba imoto eco-friendly.
Sivame ukuthengisa ngokuthe ngqo imoto yokuhlamba imoto kumthengi wethu, endaweni ye-shampoo okanye i-detergent
ifomula kunye nezithako. Ukugcina iindleko zothutho nokunyusa imali yentengiso kunye nenzuzo.
Ukuba u khangela Iimoto zengcali zeemveliso, kukuhle ukhethe apho!
Indlela yokwenza i-shampoo yokuhlamba imoto ye-biodegradable?
5.0 kgs umgubo wokuvasa imoto + 15.0 iilitha zamanzi=20 Iilitha ezigxininisiweyo zeshampu! (Ihlaziywe 1:4 umlinganiselo wokuxutywa ngoku)
♦ 1kg umgubo unyibilike 3.0 - 4.0 ilitha yamanzi (1:3-1:4)
♦ Ukuxuba ngokupheleleyo umgubo ngamanzi (Kude kungafumaneki intsalela engumgubo)
♦ Iyakwazi ukuguqulwa ibe yinqwelo ehlambulukileyo yokuhlamba imoto emva kweeyure ze-6.
♦ Emva koko ishampu iyaqhubeka nokuhlanjululwa: Kwitanki yogwebu (1:80), inkanunu yogwebu (1:5-1:8)
Impembelelo emangalisayo yokucoca, eyenziwe yi-20kgs ehlambulukileyo yokuhlamba imoto inokucoca iinqwelo ze-1000!
Kugqityiwe Shampoo yokuhlamba imoto, isepha evela kwizinto ze-OPS ezigxile kwi-masterbatch.
Ukuba ufuna ukwenza i-DIY yokuhlanjwa kweeshampu okanye isitshizi. Silukhetho lwakho olulungileyo.
Ukujonge phambili ukuseka ubudlelwane obuhle bezoshishino kwaye ube nguwe imoto ichaza ababoneleli bemveliso!
UkuCoca kweeNqwelo zeeMpahla Iinkcukacha
I-Masterbatch egxininisiweyo yokuCoca
Umkhiqizo ocacileyo. 1MT
Nceda uqinisekise ukuba ungumntu ngokukhetha intliziyo.